Il-ganacsi: Markab laga leeyahay Itoobiya oo ku xirtay Berbera | KEYDMEDIA ONLINE
Il-ganacsi: Markab laga leeyahay Itoobiya oo ku xirtay Berbera
Qorshaha fog ee dekadda Berbera ayaa durba billowday, maalmo kadib markii ay daahfureen Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Guddoomiyaha guud ee DP World Suldaan Axmed bin Sulayem.
BERBERA, Soomaaliland - Markab laga leeyahay dalka Itoobiya, oo lagu magacaabo Gibe, ayaa markii ugu horreysay ku xirtay Dekedda Berbera ee Somaliland, sida laga soo xigtay Shirkadda Adeegga Maraakiibta Itoobiya ee (ESLSE).
Markab-kaan, oo ay ugu yaraan saaran yihiin, 11,200 tan oo sokor iyo bariis ah, ayaa durba soo gaaray dekedda, kadib markii maalmo ka hor la furay marasada cusub ee Berbara, halka markab kale oo lagu magacaabo, Shebeelle la filayo inuu asbuuca soo socda ku xirto dekadda.
Adeegsiga dekedda Berbera, waxay kordhin doontaa, fursadaha dhaqaale ee Soomalida, waxayna furi kartaa waddo ganacsi oo sababi doona isku filnaasho buuxa.
Wadada isku xirta Berbera iyo Itoobiya ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inay horraanba abuurtay tartan xooggan oo gobolka ah.
Agaasimaha Isgaarsiinta ee ESLSE, Ashebir Nota ayaa sheegay in maraakiib dheeri ah ay geyn doono Berbera, kadib marka ay qiimeeyaan suuqyada Dekedda Berbera.
Dekedaha Jabuuti ayaa daboola in ka badan 90 boqolkiiba soo dejinta iyo dhoofinta Itoobiya, halka heshiiskii Eretrea ee 2018 uu qudhiisu abuuray xiriiir ganacsi, hayeeshee dekedda Berbera ay hadda ah mid kale oo muhiim ah.
Golaha Wasiirrada ee Xukuumadda Fadaraalka Soomaaliya, ayaa Saddex sano ka hor sharci darro ku tilmaamay heshiiska Dekadda Berbera ee u dhaxeeya Soomaliland iyo shirkadda DP World, halka Baarlamaanka Soomaaliya uu 12 Maarso 2018, si buuxda u diiday heshiiskaas, inkastoo Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo uusan wali saxiixin.
Heshiiska qaybsiga dekedda Berbera wax talo ah lagama siin dowladda Soomaaliya, waxaana la meel mariyay iyadoo la adeegsanayo heshiis ay saxiixeen Madaxweynaha Somaliland Muse Biixi, Shirkadda DP World iyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.